Isu tinofunga zvinofungwa nevatengi, kukurumidzira kwekurumidzira kuita mukuda kwenzvimbo yemutengi musimboti, uchibvumidza kunaka kwemhando yepamusoro, mitengo yekugadzirisa yakaderera, mitengo inonzwisisika, yakakunda vatengi vatsva nevakuru tsigiro nekusimbiswa kweZvigadzirwa, Bhosi Zvinosunga, Dual Pipe Clamp, Nyore Metal Pipe Fittings, Tinogamuchira vatengi, masangano ebhizinesi uye shamwari dzinobva kumatunhu ese epasi kuti vatibate uye titsvake kudyidzana kuti tibatsirane. Isu tinoramba tichivandudza pamusoro uye kugadzirisa zvinhu zvedu uye kugadzirisa. Panguva imwecheteyo, isu tinoshingairira kuita tsvagiridzo uye kufambira mberi kweZvekugadzirwa, Iyo yakanakisa uye yepakutanga mhando yezvipenga zvikamu chinhu chakanyanya kukosha pakutakura. Tinogona kunamatira pakupa yekutanga uye yakanaka mhando zvikamu kunyangwe zvishoma purofiti yakawanikwa. Mwari achatiropafadza kuti tiite mutsa bhizinesi nekusingaperi.
Nhoroondo 1.Malleable iron pipe clamp fittings Chigadzirwa chedu chinogadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa neE-GJMB-300-6 ine tensile simba min 300 N / mm2 uye elongation min 6% .Kazhinji simba rechokwadi rakasimba kupfuura mazana matatu, zvinogona kusvika ku330 uye iko kukwirisa kunogona kusvika ku8% .Izvi zvinoreva kuti zvinhu zvedu zviri pakati peEN-GJMB-300-6 uye EN-GJMB-330-8. 2.Usage: nyore kufurirwa simbi mutopota okusungisa fittings anoshandiswa kubatanidza simbi Tubing, diff ...
Carbon simbi minyatso ine chaiyo saizi, iri nani mechina maitiro uye kuomarara, uye yakashandiswa zvakanyanya mukuvaka simba, kugadzirisa, uye ekugadzira maindasitiri Isu tinopa yakazara huwandu hweCarbon Simbi Nyini. Uye zvakagadzirwa nehunyanzvi timu inoshandisa yakakwira giredhi kabhoni simbi & tekinoroji mberi michini.
Yakadzvanywa mweya kuendesa, kubatanidza pneumatic maturusi uye pneumatic masystem, emvura masisitimu muindasitiri, kunzvimbo dzekuvaka, kurima uye horticulture.
Mbiri Bolt Pipe Clamp, Stainless Simbi Hose Inokurumidza Kubatanidza, Machena machena, Hose Fittings Uye Kubatanidza, Aluminium Pipe Fittings, Mhepo Line Hose Chinobatanidza, Male Mhepo Hose Chibatanidza, Nhema Iron Castings, Reducer Nipple Stainless Simbi, Kwakakurudzira Pipe Fittings,
Mhepo Hose yekubatanidza Europen Rudzi, Kubatanidza Air Hose, Stainless Simbi Minyatso Uye Fittings, Stainless Simbi Minyatso, Stainless Simbi Pipe Minyatso, Air Hose payakabatanidzwa,